मनोरञ्जन Archives - sandeshpost
Home > Archive by Category मनोरञ्जन
December 12, 2018 admin9
सेक्स संसारको सर्वोत्कृष्ट आनन्ददायक चीज हो, जसका कारण सेक्स सधैं चर्चाको शिखरमा रहन्छ । सेक्सलाई अझ आनन्दायक बनाउन विभिन्न शैली, पोजिसन, पहिरन, बेड, स्थानजस्ता कुराको पनि विशेष ख्याल गरिन्छ । महिलालाई सबैभन्दा बढी मज्जा दिने सेक्स पोजिसन के -के छन् त ? डग पोजिसनः डग पोजिसनबाट महिलाले सबैभन्दा बढी आनन्द पाउँछन् । यो पोजिसनमा सेक्स […]
मुम्बइ। जो सुन्दर र ह्याण्डसम छ उ नायक वा नायिका बन्ने बाटोमा लाग्छन् । तर कतिपय कलाकारहरु ह्याण्डसम र सुन्दर भएर पनि पर्दा पछाडी नै हुन्छन् । बलिउड होस वा नेपालमा नै किन नहोस् कैयौं नयाँ नयाँ गायन प्रतिभाहरु भित्रिएका छन् । केही स्थापित भएका छन् भने केही टिक्न नसकेका पनि छन् । आजको समयमा […]
भारतीय कमेडियन कपिल शर्माको विवाह आज
December 12, 2018 admin14
भारतका चर्चित कमेडियन कपिल शर्मा आज डिसेम्बर १२ मा विवाह गरिरहेका छन् । कपिल उनकी पे्रमिका गिन्नी चतरथका साथ भारतको पञ्जाबमा लगनगाँठो कस्दैछन् । विवाहका लागि कपिल शर्माका साथीहरु तथा हास्यकलाकार कृष्णा अभिषेक, सुमोना चक्रवर्ती, राजीव ठाकुर र गायिका ऋचा शर्मालगायत ‘द कपिल शर्मा शो’का सम्पूर्ण सदस्य पञ्जाब पुगेका छन । यसअघि दीपिका पादुकोण र […]
विश्वको ठूलो जनसंख्या सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष जोडिएको छ जसका कारण संसार निकै साँघुरो भैसकेको छ । कोसौं टाढा घटेका घटना क्षणभरमै संसारभर एकैपटक भाइरल हुन्छन् । दशकौंअघि छुटेकाहरू पुन: भेटिन्छन्, को–कहाँ–कसरी–के गर्दैछ भन्ने कुरा भेटेर वा फोन गरेर बताइरहनु पर्दैन, एउटै क्लिकमा ब्रह्माण्ड भेटिन्छ–आफ्नै कोठाको ओछ्यानमै बसी–बसी ।
अहिले सामाजिक सञ्जाल क्रेज यसरी बढ्दैछ कि थोरै मानिस मात्र यसबाट अछूतो छन् । विश्वको ठूलो जनसंख्या सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष जोडिएको छ जसका कारण संसार निकै साँघुरो भैसकेको छ । कोसौं टाढा घटेका घटना क्षणभरमै संसारभर एकैपटक भाइरल हुन्छन् । दशकौंअघि छुटेकाहरू पुन: भेटिन्छन्, को–कहाँ–कसरी–के गर्दैछ भन्ने कुरा भेटेर वा फोन गरेर बताइरहनु पर्दैन, एउटै […]
December 11, 2018 admin39
प्रश्न : यौनमा छिटो सक्रिय भन्नाले कति उमेरदेखिलाई मानिन्छ ? म २६ वर्षको भएँ । मेरो उमेरअनुसार शारीरिक तथा मानसिक विकास नभएजस्तो अनुभव हुन्छ । मेरो उचाइ ५ दशमलव ४ इन्च तथा वजन ५३ किलो छ । के अत्यधिक हस्तमैथुनले शारीरिक विकासमा नकारात्मक असर पार्छ ? मेरो वीर्य पनि पातलोजस्तो देखिन्छ अनि कहिलेकाहीँ गिर्खाजस्तो हुन्छ […]
December 11, 2018 admin60
म २७ वर्षीया महिला हुँ। मेरो विवाह १७ वर्षको उमेरमा भएको थियो। त्यो बेला मेरा श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्थ्यो। माया/प्रेम के हो थाहा थिएन। बहकाउमा आएर गाउँकै विवाहित पुरुषसँग हेलमेल भयो र माया/प्रीति बस्यो । उनीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि मलाई गलत गरें भन्ने लाग्यो अनि त्यो घरमा बस्नु उचित लागेन । मैले आफ्नो घर छाडें […]
म २० वर्षकी भएँ । मैले आफ्नो केटासाथीसँग धेरै पटक यौनसम्बन्ध राखेकी थिएँ । अहिले उसले मलाई छोडेको एक वर्ष भयो । मेरो परिवारबाट अर्को केटासँग विवाह गराइँदैछ । म भर्जिन छैन । त्यसैले मैले यौन सम्बन्ध राखेको थाहा हुन नदिन के गर्नुपर्छ ?
December 10, 2018 admin56
प्रश्न: म २० वर्षकी भएँ । मैले आफ्नो केटासाथीसँग धेरै पटक यौनसम्बन्ध राखेकी थिएँ । अहिले उसले मलाई छोडेको एक वर्ष भयो । मेरो परिवारबाट अर्को केटासँग विवाह गराइँदैछ । म भर्जिन छैन । त्यसैले मैले यौन सम्बन्ध राखेको थाहा हुन नदिन के गर्नुपर्छ ? मेरो भनाइको अर्थ फेरि भर्जिन हुन के गर्नुपर्ला ? तपाईंहरू […]
December 10, 2018 admin61
काठमाडौ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पनि केही यस्ता कलाकारहरु रहेका छन् । जसको एक सन्तान मात्र रहेका छन् । जसले कामको कारण या अन्य कारण एउटा सन्तान भन्दा बढी जन्माउन भ्याएनन् । तर यो कुरा सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्ला यस्ता कलाकारहरु पनि नेपालमा रहेका छन् भनेर । जसको एक सन्तान मात्र छन् ?तपाइलार्ई यतिखेर जिज्ञासा […]
महिलालाई आकर्षित गर्न पुरुषले खानुस् यी १० खाना
December 10, 2018 admin49
पुरुषको सुन्दरता र उसको छरितोपनामा खानेकुराले विशेष भुमिका खेल्दछ । स्वस्थ खाना खानाले उसको अनुहारमा बदलाव आउँछ । पुरुष ह्याण्डसम देखिएपछि महिला आफै आकर्षित हुन्छन् । यदि चाडै नै महिला साथीहरुकोे मन जित्न चाहनुहुन्छ भने यी १० खानेकुरा रोज्नुस् । १. कागती पानी -यसले शरीरमा भएका हानिकारक टक्सीनलाई हटाई अनुहारमा चमक ल्याउदछ । जसले गर्दा […]